မွေ့ယာပြုပြင်ခြင်းအတွက်စည်းမျဉ်းငါးခုရှိသည်. ဖုန်မှုန့်များမကျစေဘဲကောင်းသောညသို့ဝင်ရန်အချိန် နည်း၍ သက်သာစေမည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်, ပိုး, စသည်တို့
စည်းကမ်း 1: Air your mattress every day
Every night, ငါတို့အိပ်ပျော်နေချိန်မှာငါတို့တစ် ဦး စီမှာရေပိုင့်တစ်ဝက်လောက်ဆုံးရှုံးတယ်, ၎င်းသည်ဖုန်မှုန့်များအတွက်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးပြီးအစွန်းအထင်းများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်. သင်မြက်ပင်မထိမီပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်, အရာလည်းဒါဆွဲဆောင်မှုကိုရှာဖွေသောသင်၏အိပ်ခန်းထဲမှာစိုထိုင်းဆကိုထိန်းညှိကူညီပေးပါမည်.
စည်းကမ်း 2: အပတ်စဉ်အိပ်ယာခင်း - အနည်းဆုံး!
အနည်းဆုံးတစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်နှင့်အနိူင်အဖုံးများကိုပြောင်းလဲပြီးအနည်းဆုံးအပူချိန် ၆၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်ဆေးကြောခြင်းဖြင့်ဖုန်မှုန့်များကိုသင်၏မွေ့ရာတွင်နေထိုင်ခြင်းကိုတားဆီးပါ။.
ချွေးများသို့မဟုတ်အခြားခန္ဓာကိုယ်အရည်များကိုသင်၏မွေ့ရာများနှင့်အဆက်အသွယ်မလုပ်စေရန်စက်ခံနိုင်သောလျှော်ထားသောမွေ့ယာအကာအကွယ်ကိုသုံးပါ. ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးတံဆိပ်ပေါ်တွင်အကြံပြုထားသည့်အပူချိန်အမြင့်ဆုံးတွင် ၂ လတစ်ကြိမ်ဆေးကြောပါ.
စည်းကမ်း 3: Vacuum your mattress regularly
Unpalatable as this may be, ငါတို့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအရေပြားဆဲလ်သေကောင်တစ်ဝက်နီးပါးဆုံးရှုံးတယ်, နှင့်ဤအချို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့матрац၌ထအဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်.
နောက်တဖန်, ဒီဖုန်မှုန့်သွင်းများအတွက်သံလိုက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်. ဖုန်မှုန့်များနှင့်သေစေနိုင်သောအရေပြားဆဲလ်များကိုသင်၏မွေ့ရာကိုစုပ်ထုတ်မှုနည်းသောအခြေအနေတွင်တစ်လတစ်ကြိမ်ဖုန်စုပ်ခြင်းဖြင့်အအေးခံပါ, သင်၏ဖုန်စုပ်စက်၏ကူရှင်ချုပ်ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုသည်.
သင်၏မွေ့ရာ၏အနားစွန်းတစ်လျှောက်ရှိပိုက်လိုင်းများသည်ဖုန်မှုန့်များနှင့်အရေပြားဆဲလ်သေများစုဆောင်းခြင်းကိုအားပေးနိုင်သည်, လုပ်နိုင်တဲ့ခလုတ်ကိုအဖြစ်, ဒါကြောင့်ဒီဒေသများအထူးအာရုံစိုက်ပေးပါ.
စည်းကမ်း 4: Check if you should turn your mattress80°
Check if you should turn your mattress80° and flip weekly for three months after you buy them, ထို့နောက်သုံးလေးလတိုင်းတစ်ကြိမ်. သင်၏မွေ့ရာကိုလှန်ချသောအခါသို့မဟုတ်လှည့်ရန်သင်မှတ်မိရန်ကူညီသည်, သင်၏ပြက္ခဒိန်တွင်သတိပေးချက်တစ်ခုရေးပါသို့မဟုတ်သင့်ဖုန်းပေါ်တွင်သတိပေးချက်တစ်ခုထားပါ.
စည်းကမ်း 5: Act fast on spills and stains
As with most stains, ကြာကြာသင်မွေ့ရာအစွန်းအထင်းထားခဲ့ပါ, သူတို့ကရွှေ့ဖို့ခက်ခဲလေလေ.
အမှတ်အသားများ (Tags): Buy sofa set, mattress customization